Wax Ka Baro Lacagta Qaaliga Ah Ee Bitcoin Oo Suuqyada Ka Saari Doonta Dollar-ka Mareykanka + SAWIRRO - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » Wax Ka Baro Lacagta Qaaliga Ah Ee Bitcoin Oo Suuqyada Ka Saari Doonta Dollar-ka Mareykanka + SAWIRRO
Wax Ka Baro Lacagta Qaaliga Ah Ee Bitcoin Oo Suuqyada Ka Saari Doonta Dollar-ka Mareykanka + SAWIRRO
Ganacsiga Internetka ayaa si weyn ugu tiirsan waxa loogu yeero qeybta sadaxad oo ah Hay’ado iyo bangiyo ka shaqeeya kala wareejinta lacagaha dadka waxku kala iibsada internetka kuwaas oo ey lacagtu sii marto halkasna Qidmad ku goosta.
Sida taariikhyahanadu sheegaan cryptocurrence waxay soo baxday intii uu socday waxa loogu yeero “Dagaalkii 2-aad ee Dunida” Waa lacag Dhijitaal ah (Signal iyo Data) tasoo ka sameysan xarfo iyo numberro sir oo la xakameyay, waa lacag la xariirta internetka tasoo isticmaasha Cryptography( hab xogta caadiga ah loogu badalo wax aan la jabsan Karin, ) si aan loo daba galin wixii lakala gatay ama lakala wareejistay.
Bitcoin waxay leedahay Software aad ula soo dagi karto si free ah Computerkaaga ama Telefonkaaga kaas oo kuu abuuraya Shandad bitcoin ah taasi oo aad ku dirsan karto laguuguna soo diri karo lacagta bitcoin. Waxaa jira wax la yiraahdo “Plockchain” kaasi oo ah meel eey ku diiwaan gashanyihiin Dhammaan kala wareejis kasta (transaction) oo dhacay, isla markaas diiwaan galintaasi waa mid guud oo qof kastaa uu arki karo lana soconkaro. Bitcoin uma baahna macluumaad kaaga sida magacaga iyo meeshaad joogto. kaliya waxay u baahantahay in aad heysato internet isla markasna aad sameysato shandada bitcoin.
– Inaad qof heysta uu kaaga adeegto.
” Bitcointu waa mid xiiso leh maxa yeelay waxay muujineysaa sidey raqiis u tahay. Bitcoin way ka fiicantahay lacagta caadiga ah maxa yeelay muhiim maaha iney muqaal ahan u heystatid. Dabcan, Kala warejisyada(transactions) faraha badan waa lagaga fiicanyahay lacagta caadiga ah”
” Waxay ila tahay farsamo cajiib ah o lala dhaco, lakiin waa meel eey Dowladuhu kasii ambaqaadi karaan kaalintooda muhiimka ah” oraahahaas waxaa yiri Bill Gates.
2. Dr. Eric Schmidt: Waa mid kamid ah madaxda shirkada Google waxa uu ka hadlayaa doorka Bitcoin: ” Farsamada bitcoin wax aka dhigantahay hormar la taaban karo oo laga gaaray Cryptographyga” ayuu yiri Eric.